Ama-Deep Groove Ball Bearings Basic Parameters - I-Rihoo Industry (Hongkong) Co., Limited
I-Deep Groove Ball Bearings I-groove Deep ibhola yokubheja yiyona ndlela ejwayelekile kunazo zonke zokubheja. Amapulangwe e-ball groove ejulile ahlanganisa indandatho yangaphandle, indandatho yangaphakathi, iqoqo lezinsimbi zensimbi kanye neqoqo labagcini. I-deep groove ball bearing izinhlobo ziyingqayizivele futhi ziphindwe kabili irowu ezimbili, isakhiwo esijulile ibhola isakhiwo ibuye ihlukaniswe zibe izinhlobo ezimbili zesakhiwo futhi ovulekile, uhlobo oluvulekile libhekisela ekuthwaleni ngaphandle kokugaya isakhiwo, ibhokisi uphawu olujulile ibhola lihlukaniswe nothuli seal kanye nophawu lwamafutha.
I-Deep Groove Ball Bearings I-groove Deep ibhola yokubheja yiyona ndlela ejwayelekile kunazo zonke zokubheja. Amapulangwe e-ball groove ejulile ahlanganisa indandatho yangaphandle, indandatho yangaphakathi, iqoqo lezinsimbi zensimbi kanye neqoqo labagcini. I-deep groove ball bearing izinhlobo ziyingqayizivele futhi ziphindwe kabili irowu ezimbili, isakhiwo esijulile ibhola isakhiwo ibuye ihlukaniswe zibe izinhlobo ezimbili zesakhiwo futhi ovulekile, uhlobo oluvulekile libhekisela ekuthwaleni ngaphandle kokugaya isakhiwo, ibhokisi uphawu olujulile ibhola lihlukaniswe nothuli seal kanye nophawu lwamafutha. Izinto zokugcina umfutho we-platin steel stamping, kuphela ukudlala indlela elula yokuvimbela uthuli ukuba lube ngumjaho ophetheyo. Uhlobo olungenayo i-oyela lwamafutha oxhumana naye, lungavimbela ngokuphumelelayo amafutha ngaphakathi kwe-spill bearing.
Ibhola elilodwa elilodwa elibhekene nebhola elibhekene nekhodi yomhlobo we-6, i-double row groove ball bearing code 4. Isakhiwo sayo silula, kulula ukuyisebenzisa, yilokho okukhiqizwa kakhulu, okusetshenziswe kabanzi ekilasini lamabherethi.
I-Deep Groove Ball Bearings I-deep groove ibhola yokubheja ibhekwa ikakhulu imithwalo yemisebe futhi ingaba nemithwalo yomabili kanye ne-axial. Uma kutholakala kuphela ngemithwalo yemisebe yomsindo, i-angle yokuxhumana i-zero. Lapho ama-ball bearing ajulile enezikhala ezinkulu, ephethe ukuxhumana okungaxhunyiwe, angakwazi ukumelana nomthwalo omkhulu we-axial, i-groove ball ebhekene ne-coefficient encane kakhulu, ijubane lokulinganisa liphakeme kakhulu.